अमेरिकालाई इरानको जबाफ !
एजेन्सी । अमेरिकाले इरानको मानवरहित विमान (ड्रोन) खसालेको भनी गरेको दाबी इरानको सशस्त्र बलले अस्विकार गरेको छ । सबै ड्रोन शिवीरमा सुरक्षित रुपमा फर्केको यहाँको समाचार समितिले जानकारी दिएको छ ।
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकामा गत साताको बेरोजगारी दरमा सामान्य बृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ ।
एजेन्सी । इरानका विरुद्धमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउने हो भने इरान अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा बस्न तयार रहेको इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले बताएका छन् ।
ह्युस्टन । तीब्र गतिको आँधीसँगै आएको बाढी र पहिरोमा परी अमेरिकाको पूर्वी शहरहरुमा हजारौँ प्रभावित भएका छन् ।
अमेरिकामा माछा असुरक्षित !
सान फ्रान्सिस्को । जलवायु परिवर्तका कारण विश्वको तापक्रममा वृद्धि हुने क्रमसँगै अमेरिकी एक राज्य विन्कन्सनमा प्राकृतिक रूपमा खोला, नदी तथा तलाउमा पाइने माछाको भविष्यमा आगामी केही दशकभित्र नै व्यापक चुनौति आएको सोमबार सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
'अमेरिकाको एकतर्फी दादागिरी कहिलेसम्म'
कोपा अमेरिका कपको फाइनलः ब्राजिल भर्सेस पेरु, कसले मार्ला त बाजी ?
एजेन्सी । ब्राजिलमा जारी ४६ औं संस्करणको कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि आज आयोजक राष्ट्र ब्राजिल र पेरु भिड्दै छन् । माराकाना स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति १ः४५ बजे दुवै टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
वासिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिसा मेले उत्तर कोरियाको बारेमा छलफल गरेका छन् ।